Guddoonka golaha shacabka oo si rasmi ah u sharciyeeyey xildhibaanada Ceel-Waaq - Caasimada Online
Home Warar Guddoonka golaha shacabka oo si rasmi ah u sharciyeeyey xildhibaanada Ceel-Waaq
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka Golaha Shacabka ee baarlamanka Soomaaliya, oo go’aan rasmi ah kasoo saaray xildhibaanada muranka uu ka taagnaa ee gobolka Gedo, ayaa u aqoonsaday xildhibaanada lagu soo doortay Ceel-Waaq inay yihiin kuwa sharciga ah ee matalaya gobolkaas.
Guddoonka ayaa sidoo kale xusay go’aankii uu ku aqoonsaday Guddoomiyihii KMG ahaa Xildhibaan Amb. Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan (Dhabanacad) Xildhibaanda lagu soo doortay Degmada Ceelwaag ee Gobolka Gedo, xildhibaanadaas oo la dhaariyey, islamarkaana habraacooda loo dhamaystirey si waafaqsan go’aankii guddoomiyaha KMG ahaa Xildhibaan Amb. Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan (Dhabanacad).
Sidaas darteed, guddoonka ayaa go’aamiyey qodobadan:
1- In Xildhibaanada lagu soo doortey degmada Ceelwaag ee gobolka Gedo ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka Gedo baarlamaanka 11aad; maadaama madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland uu furay doorashada, habraaca doorashadooda ay qabteen Guddiga Hirgalinta Doorashadda dadban ee Heer Dawlad Goboleed, shahaadada rasmiga ee Xildhibaanimadana ay siiyeen Guddiga Hirgalinta Doorshadda Dadban ee heer Federaal, una taageerey R/Waasaraha X.F.S oo ah madaxa doorshada dadban ee 2021/2022, sidaa darteed aanay jirin meel laga duro habraaca xildhibaanada lagu soo doortey degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
2- Guddoonku waxuu ku talinayaa dadka walaalaha ee Gobolka Gedo ee xurgufta siyaasadeed soo kala dhex gashay in ay khilaafkooda wadahadal ku dhameeyaan maadaama ay doorashadii dhamaatey.